दोलखाको खोलामा दम्पती बेपत्ता- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
दोलखा — उत्तरीगाउँ बिगु गाउँपालिका वराङस्थित टाइबा बस्तीको खोलामा श्रीमान–श्रीमती बेपत्ता भएका छन् ।
खोलापारी बारीमा हिँडेका करिब अन्दाजी ६० वर्षमाथिका रामजी विश्वकर्मा र बुधमाया विश्वकर्मा खोलामा बेपत्ता भएको आशंकामा खोजी भइरहेको बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधृष्ठिर खड्काले बताए । दम्पती सोमबार बिहान ११ बजेतिर बारी गएको स्थानीयले बताए ।
दम्पती मात्रै रहेको उनीहरुका घरका वस्तुहरु कराउन थालेपछि मात्रै हराएको थाहा भएको थियो । अध्यक्ष खड्काका अनुसार खोला छेऊमा दम्पत्तिले लगाउने चप्पल भेटिएको आधारमा खोजी कार्य थालिएको हो । स्थानीय र प्रहरीले खोला छेऊछाऊ खोजी गरेको तर पत्ता नलागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रवक्त रेशम बोहराले बताए ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १६:४६
नेपालमा यसकारण जान्छ पहिरो
काठमाडौँ — हरेक वर्षजस्तै यसपटक पनि वर्षायाम सुरु भएसँगै देशभर बाढी र पहिरोले जन–धनको क्षति हुन थालेको छ । ‘वर्षायाममा पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान’ भन्ने उखान नै बनिसकेको छ ।
नेपालमा किन बर्सेनि बाढी र पहिरो गइरहन्छ ? बाढी र पहिरोको जोखिम हरेक वर्ष हुने थाहा हुँदाहुँदै सरकारले किन यसलाई रोक्न सकेको छैन ? सरकार के काम गर्नबाट चुकेको छ ? अब सरकारले के गर्नु पर्छ ? भूगर्भविद् डा. कृष्ण देवकोटासँगको कुराकानी ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७७ १६:४३
निषेधाज्ञामा पनि निरन्तर मजदुरी
७० घरका १३० लाई कोरोना
दुवै चरणको खोप लगाएका मेयर पुन: संक्रमित
बाढी–पहिरोपीडित अझै टहरामै